News - Isi ihe anọ maka nlebara anya na ndozi na ndozi nke bọlbụ miri emi
Isi ihe anọ maka nlebara anya na ndozi na ndozi ntugharị bọọlụ miri emi
Otu esi ahọrọ oke agba
Nke mbụ, mee ka ebe a na-agba ya na gburugburu ya dị ọcha
Achọghị m ịgwa gị ihe na-emenụ. Ọbụlagodi na uzuzu adịghị ahụ anya na-abanye na ntanye HGF, ọ ga-eyi nkpa. Ikwu ya n'ezoghị ọnụ, ị gaghị ete ájá ọ bụla n'anya gị, nke bụ eziokwu!
Nke abuo, ihe echichi kwesiri iji nlezianya na ntinye ziri ezi
Anyị agaghị enwe ụdị ọgụgụ isi dị otu a, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, yabụ emela nnukwu bọọlụ bọọlụ miri emi, laa n'ụlọ ka ị gwuo egwu, ihe kachasị mkpa bụ ka ekweghị ka stampụ siri ike, ekweghị ka ịpịa ya ozugbo. na-adịghị atụ egwu nke gbajiri agbaji, ị e tiwara deformation, otú e si eme, na-agba ha onwe ha weere, ha ha, na-adịghị ekwe ka ịnyefe nsogbu site na ahu.
Nke ato, jiri ngwa echichi kwesịrị ekwesị ma zie ezi
Gbalịa iji ngwá ọrụ pụrụ iche ma gbalịa izere iji akwa na eriri staple.
Nke anọ, iji gbochie ibibi corrosion, anaghị eji blisters
Ejiri ezigbo ígwè mee Qyzc amị, mana ọ na-atụkwa egwu mmiri. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị ya, gbanye ya na mmiri, ha ha, mgbe ị na-ejide aka, ị ga-asachasị ọsụsọ n'aka gị, ma were mmanụ ịnweta mmanụ dị elu kpuchie ya tupu arụ ọrụ. N'oge udu mmiri na ọkọchị, tinye uche pụrụ iche na mgbochi nchara. Agwakwala m ihe m ga-atụ ụjọ nchara. Ọ dị mma, nwalee ya n'onwe gị ma hụ ihe nsonaazụ nchara ga-abụ!
Ọ dị irè iji nyochaa griiz na mmanụ na-ete mmanụ iji ghọta ọnọdụ ọrụ nke amị qyzc. N'ezie, a na-ekpebi ụcha mmiri, ụcha na mmebi nke griiz ma ọ bụ mmanụ site na mmiri, adịghị ọcha, ntụ ntụ, wdg.
A na-ahụta na ọ bụrụ na enwere mmanu mmanu na ihe ndị si mba ofesi dịka ntụ ntụ na ntụ ntụ agwakọtara, a ga-ahụ ụta mmiri, ọnọdụ okpomọkụ na ịma jijiji nke nnukwu bọlbụ miri emi. Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla, a ga-arụzi ọrụ n'oge.
Post oge: Dec-18-2020